नेकपाको सचिवालय बैठक प्रधामन्त्री निवासमा, के विषयमा हुँदैछ छलफल ? – Everest Dainik – News from Nepal
नेकपाको सचिवालय बैठक प्रधामन्त्री निवासमा, के विषयमा हुँदैछ छलफल ?
काठमाडौँ, साउन १ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको छ । बैठकमा चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा गरिएको परिमार्जनको विरोधमा अनशनमा रहेका डा. गोविन्द केसीका मागका बारेमा छलफल भइरहेको बुझिएको छ ।
विधेयकमा गरेको परिमार्जनले जनताको हित भन्दा पनि माफियाको हित हुने भन्दै डा. केसी जुम्लामा अनशन बसीरहेका छन् । यस्तै संसदमा कांग्रेसले त्यसको विरोधमा प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । यही कारणले संसद बैठक पनि अवरुद्ध हुने गरेको छ ।
यस्तै सचिवालय बैठकमा केही दिनअघि अनुमोदित पार्टीको नियमावली अनुसार पार्टीका सबै कमिटी र जनवर्गीय संगठनको सांगठनिक एकीकरणको योजना बनाउने विषयमा पनि छलफल हुँदैछ । गएको असार २७ गतेको सचिवालय बैठकले पार्टीको नियमावली अनुमोदन गरेको थियो ।
ट्याग्स: नेकपाको सचिवालय बैठक, प्रधामन्त्री निवास